Bruno Fernandes oo Farriin u diray xiddig saxiixiisa la la xiriirinayey Kooxda Manchester United – Gool FM
Bruno Fernandes oo Farriin u diray xiddig saxiixiisa la la xiriirinayey Kooxda Manchester United
Haaruun October 9, 2021
(Manchester) 09 Okt 2021. Laacibka khadka dhexe ee Bruno Fernandes ayaa farriin u diray xiddiga saxiixiisa la la xiriirinayey Manchester United ee Raphinha.
Bruno Fernandes ayaa ugu hambalyeeyey xiddigii hore ee ay isku kooxda ahaayeen Raphinha in markii ugu horreysay laga wacay xulka waa weyn ee qaranka Brazil.
Dhinaca kale Jariiradda Mirror ayaa warinaysa in Bruno Fernandes uu la xiriiray 24-sano jirkaan ka tirsan Kooxda Leeds United iyo xulka qaranka Brazil ee Raphinha, isla markaana uu kala hadlay suurogalnimada uu ku iman karo garoonka Old Trafford.
Raphiha iyo Bruno Fernandes ayaa u soo wada ciyaaray Kooxda Sporting CP, waxaana xiddigan reer Brazil la la xiriirinayey inuu ka soo tago Leeds United oo uu u soo dhaqaaqo Kooxda Manchester United.
Labada laacib ayaa si wadajir ah ugu ciyaaray Sporting CP ee Waddanka Portugal, waxayna sii wadeen xiriirkooda, inkastoo Raphinha uu u ciyaaro kooxda ay Man United xifaaltamaan ee Leeds United.
Man United ayaa suuqii xagaagii la la xiriirinayay Raphinha, laakiin waxa ay la soo wareegtay Jadon Sancho oo kaga yimid Borussia Dortmund lacag dhan 73 miyan oo gini.
Dhanka kale Leeds ayaa la saxiixatay Daniel James si uu garoonka Elland Road ugula biiro xiddiga reer Brazil maalintii ugu dambeysay ee suuqa kala iibsiga xagaaga, weliba heshiis dhan 25 milyan oo gini ah oo lagu daray gunnooyin.
Kooxda Barcelona oo qarka u saaran inay qandaraas cusub ka saxiixato mid ka mid ah xiddigaheeda
Newcastle United oo qorsheeneysa inay la soo saxiixato AFAR xiddig ka tirsan Manchester United